Dastuurka Mareykanka iyo Baaqa Madaxbannaanida ayaa hadda leh 'luqad waxyeello leh'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Dastuurka Mareykanka iyo Baaqa Madaxbannaanida ayaa hadda leh 'luqad waxyeello leh'
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Waallida saxnaanta siyaasadeed ee cakiran uma tudho Dastuurka Mareykanka, Baaqa Madax -bannaanida iyo Xeerka Xuquuqda.
Kaydadka Qaranka ee Mareykanka ayaa sumad u ah Baaqa Madax -bannaanida iyo Dastuurka Mareykanka oo wata summadaha digniinta luqadda
Dukumiintiyada taariikhiga ah ayaa hadda loo arkaa inay ka kooban yihiin "waxyaabo waxyeelo u keeni kara".
Diiwaan -hayaha ayaa loo sheegay inay ku wargeliyaan isticmaaleyaasha wax ku saabsan jiritaanka iyo asalka “waxyaabaha xun”.
Calaamadaha “Digniin Luuqadeed oo Waxyeello leh” ayaa ka soo muuqday bogagga mareegaha Maktabadda Qaranka Mareykanka oo muujinaya noocyadii la baaray ee Baaqa Madax -bannaanida iyo Dastuurka. Summadaha digniinta ee 'luuqad waxyeello leh' ayaa sidoo kale ka muuqda bogagga ay ku qoran yihiin tobanka wax -ka -beddel ee ugu horreeya, oo loo yaqaan Xeerka Xuquuqda.
Markii ugu horreysay ee ay soo booqdeen mareegaha Maktabadda Qaranka sidii kaftan ama natiijada weerar hacker, si kastaba ha ahaatee ma ahayn wax kaftan ah.
Xiriirka shaybaarkael wuxuu u horseedaa Maamulka Keydka Qaranka iyo Maamulka Diiwaanka (NARA) bayaan ku saabsan “waxyaabaha laga yaabo inay waxyeello u geysan karaan,” oo lagu qeexay inay ka tarjumayaan “cunsuriyad, jinsi, karti, dhaqan -xumo/misogynoir, iyo fikradaha iyo dabeecadaha ajnabi -nacaybka” ama noqoshada “takoorid ama ka saar aragtiyo kala duwan oo ku saabsan galmada, jinsiga, diinta, iyo in ka badan,” shuruudaha.
Diiwaan -hayeyaasha ayaa loo sheegay inay ku wargeliyaan isticmaaleyaasha ku saabsan joogitaanka iyo asalka “waxyaabaha waxyeellada leh”, cusboonaysiinta sharraxaadda oo leh “shuruudo ixtiraam badan” oo ay sameeyaan “ballanqaad hay’adeed oo ku aaddan kala duwanaanshaha, sinnaanta, ka mid noqoshada, iyo helitaanka.”
Ma cadda markii Dastuurka, Baaqa Madax -bannaanida iyo Xeerka Xuquuqda lagu tilmaamay kuwo waxyeello keeni kara. Dabayaaqadii bishii Luulyo, intii lagu guda jiray akhrinta dhaqameed ee Baaqa sannad -guuradii ka soo wareegtay markii la qaatay - July 4, 1776 - Raadiyaha Dadweynaha Qaranka ayaa ku daray beenin markii ugu horreysay, isagoo leh "ereyada ku qoran dukumiintiga si ka duwan ayay u kala duwan yihiin" ka dib "mudaaharaadyadii xagaagii hore iyo xisaabinta qarankeenna ee isirka."
Tani waxay tixraac u ahayd mudaaharaadyadii Black Lives Matter ee billowday May 2020, ka dib geeridii George Floyd ee Minnesota, oo ay si degdeg ah ugu nisbeeyeen kooxaha u ololeeya cunsuriyadda hay'adaha ee booliska iyo dhammaan nidaamka bulsheed iyo siyaasadeed ee Mareykanka. Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga iyo Kamala Harris ayaa taageeray dibadbaxayaasha; Bishii Abriil, ka dib markii askari bilays ah oo Minneapolis ah lagu helay inuu dilay Floyd, hadda Madaxweyne Biden iyo Ku -xigeenkiisa Harris ayaa ammaanay xukunka waxayna dalbadeen dib -u -habayn lagu sameeyo magaca caddaaladda jinsiyadda.
Tweets -ka taxanaha ah ee bishii Luulyo, NPR waxay sheegtay in Baaqa Madax -bannaanida ay ku jiraan "cillado iyo munaafaqnimo aad u qoto dheer", oo si gaar ah farta ugu fiiqaya "cunsuriyad cunsurinimo ah oo ka dhan ah dadka asaliga ah" ku saabsan taajka Ingiriiska.
Deuce wuxuu leeyahay,
September 10, 2021 at 18: 53
waan ka daalay cunsuriyaddan iyo hurdada ka soo horjeedda waxay u maleeyaan in waddankeennu yahay cunsuri laakiin ma aha oo waxay u malaynayaan inay takoori karaan dadka caddaanka ah oo ay ka fogaadaan waa khalad waan xanuunsanahay oo waan ka daalay in laygu yeero cunsuri wax aan khalad ahayn
George Petaki wuxuu leeyahay,
September 9, 2021 at 17: 11
Kuwaan oo qaylinaya waxyaalahan “xun” oo dhan ayaa ah kuwa adeegsada ereyadan, sumadaha, xigashooyinka, iyo kuwa kale nolol maalmeedkooda. Dhaqdhaqaaqyada xorta ah ee bidixda ee "boo-hoo" ku qaylinaya "cunsuri" dhammaan dadka ku xeeran, laakiin ku guuldareysta inay muraayad fiiriyaan oo ay arkaan "kacdoon-wadayaasha" dhabta ah ee dhaawacaya waddankeenna oo taariikh ahaan ah "cunsuriyiinta dhabta ah". Eeg taariikhda oo arag in jinniyaduhu ay ka wadaan USA xaalado aad u xun.
Tim wuxuu leeyahay,
September 8, 2021 at 11: 43
Goorma ayay “wokists” toosi doonaan oo joojin doonaan isku dayga dib-u-samaynta taariikhda? Wacyigelinta iyo garashada “xadgudubyadii” hore ayaa ah intaas oo kaliya waxayna leedahay qiime markaan dib u qiimaynayno khaladaadkii hore. Si kastaba ha ahaatee, marmarsiiyo uma noqonayso tirtirka taariikhiga ah!